Soomaaliya: Hawlaha oo la Balaarinaayo iyadoo ay caqabadooyinna jiraan - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Soomaaliya: Hawlaha oo la Balaarinaayo iyadoo ay caqabadooyinna jiraan
26.08.2011 | General
Toddobaadyadii la soo dhaafay, hay’adda Dhakhaatiirta Aan Xuduudda Lahayn waxey ku dadaalaayeen in ay balaariyaan hawlaha MSF inkastoo ay rabshado ka taagnaayeen caasimadda oo ay weliba caqabado kalena ay jireen. Iyadoo ay sii kordheyso tirada carruurta nafaqodarrada ay hayso, waxaa cad in mujtamaca Soomaaliyeed oo uu ka xirnaa gargaarka uu u baahanyahay mucaawino dheeraad ah.
Ilaa hadda, guud ahaan 8,135 oo carruur ah ayaa laga qayb-geliyey barnaamijka nafaqeynta iyo quudinta ee MSF ee Soomaaliya; 561 oo
ka mid ah carruurtaas aad ayey u nafaqodaran yihiin waxeyna u baahan yihiin daweyn iyo daryeel heer sare ah. MSF waxey ku dadaaleysaa in ay yareyso dhimishada carruurta la il daran nafaqo-darrada iyadoo booqaneyso bulshooyinka kala duwan si ay u soo saarto dadka bukaanka ah oo u baahan daryeelka caafimaad si xaaladdooda loo dejiyo ka dibna quudin iyo nafaqeyn loo sameeyo. Kuwa u
baahan daweyn muddo dheer ah waxaa la geynayaa goobta bukaan-jiifka ee lagu quudiyo dadka ay hayso nafaqo-darrada.
Caasimada Muqdisho, Hay’addu waxey ka furtey cusbitaal 60 sariirood leh oo 50 sariirood ay yaalaan caruur aad u nafaqodaran. Dhakhaatiir kaloo wareegaya ayaa iyaguna ku sugan xeryaha iyo xaafadaha ku yaalla daafaha caasimadda.
Tan iyo bisha Agoosto 8deedi, kooxaha dhakhaatiirta waxey jadeeco ka tallaaleen in ka badan 11,000 carruur ah si loo yareeyo khatarta
cudurada faafa. MSF waxey si weyn u indha-indheyneysaa khatarta ah in shuban uu dilaaco waxeyna sidaa darteed durba ka furtey mid ka mid xeryaha magaalada sariir 50 qof looga tala galay.
Bartamaha iyo Koonfurta Soomaaliya, MSF waxaa 18 kii Agoosto, ay cusbitaallada Mareerrey, Diinsoor, Beledweyne, Afgooye, Jowhar iyo
Guriceel seexisey 342 carruur ah oo aad u nafaqodaran. Sidoo kale dhakhaatiirta ayaa waxaa ay tageero caafimaad u fidiyeen dadka ay barakiciyeen abaaraha ee ku sugan agagaarka degmooyinka Mareerrey iyo Guriceel.
Inkastoo dadaalkaas uu socdo, hay’addu waxey weli soo saari karin xaaladda dhabta ah ee nafaqo-darrada guud ee ka jirta qeybaha dalka, kooxaha MSF-na waxey weli wadaan wadahadallo si looga oggolaado in ay gaaraan qaar ka mid ah goobahaas.
Waqooyiga Soomaaliya, ilaa18kii Agoosto, 192 carruur ah ayaa laga diiwaan-geliyey xarunta quudinta iyo nafaqeynta ee waqooyiga iyo koonfurta Gaalkacyo. Duncan Mclean, oo ah maamulaha mashaariicda MSF ee Soomaaliya waxaa uu yiri, “inkastoo uusan shaki ku jirin in xaaladda ay tahay mid adag, weli waxaan haysanaa fikir ku kooban goobaha aynu ka hawlgalno keli ah.”
MSF, oo ka mid ah hay’adaha gargaarka caafimaad ee ugu weyn ka bixinayey Soomaaliya 20kii sano ee la soo dhaafay, ayaa hadda waxaa ay waddaa 13 mashruuc oo ku yaalla 8 gobol oo ka tirsan dalka. Inkastoo caqabadahaas ay jiraan, haddana MSF waxaa ay tahay hay’adda keliya ee ka hawlgasha goobaha qaar ee ka tirsan Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Tags: camps, IDPs, MSF, restart activities, vaccinations